ဆူးလေဗလီနားက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသူများ (5.6.2012) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဆူးလေဗလီနားက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသူများ (5.6.2012)
ဆူးလေဗလီနားက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသူများ (5.6.2012)
Posted by amatmin on Jun 5, 2012 in Myanma News, News | 41 comments
ကျနော်ဆူးလေဘုရားအ၀ိုင်းနားကို သွားရင်းနဲ့ဘေးနားက ဆူးလေ ဗလီရှေ့မှာ မွတ်ဆလင်အမျိုးသားများ
ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာကို တွေ့ခဲ့မိလို့
အမှန်တော့ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြစ်နေတာတွေက လူမျိုးရေး ခွဲခြားမုန်းတီးမှုကို ကူးပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်မို့..
ကွန်မန့်လည်းမပေးဘဲ နေတာတောင်.အခုဒီသတင်းဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ သဂျီးပြောနေတဲ့
စီဂျေဆိုတဲ့ထုံးစိတ်ကိုနှလုံးမူပြီး ရေပန်းစားဖြစ်ရပ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲသတင်း အဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်ဗျ..
သူတို့ပြော.တောင်းဆိုနေကြတာတော့ တရားဥပဒေ ကိုယုံကြည်ချင်ကြတဲ့ပုံပဲဗျ..
သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ စာတချို့ပေါ်လွင်ဖို့ အနီးကပ်ရိုက်ချက်
ပုံနည်းရင်.. ၀ါးနေခဲ့ရင် သည်းခံကြည့်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုရင်း..ဓါတ်ပုံအတော်များများတော့ကြုံသလို ရိုက်မိခဲ့ပေမဲ
ဆိုးရွားတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ဖြစ်ရပ်ကိုပေါ်လွင်စေလောက်မဲ့ ပုံတွေကိုပဲ တင်လိုက်ပါတယ်..နော်.
စီဂျေ ဦးမတ်ပါလား မြန်လိုက်တာ ..
မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ပဲ ..
ကိုမတ်ရေ ……… သတင်uးpdateတင်ပေးတာ ကျေးကျေးပါ ……. ကြည့်လည်းရိုက်ဦး ပြုတ်ကျဦးမယ်နော် … တံတားပေါ်ကနေ …….
ကျနော်ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာက ၂ နာရီဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပီးတော့
အခုလည်း လူစုကွဲပုံမပေါ်သေးဘဲ..ဆူးလေဘုရားဘေးပတ်လည်က ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့.
လက်သွက်တယ် … ကိုမတ်ကွ … MG CJကြီး ကွ …. ချီး ယား စ် ..
(သဂျီးမင်းသို့ … မှတ်ချက် …. မြှောက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ … သတင်းဓါတ်ပုံလျှင်မြန်စွာ ရယူနိုင်ခြင်းအပေါ် … အားတက်ခြင်းသာဖြစ်သည် )
စီဂျေ အမတ်ရဲ့သတင်းထူးကို ဓါတ်ပုံများနဲ့တွေ့ရလို့ ရှဲရှဲ
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး.. လို့ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ထားတာ.. ဖတ်မိပါတယ်..
အေးချမ်းစွာပြီးသွားပုံရတာမို့.. ဆိုင်ရာသူအားလုံးကို.. သာဓုခေါ်လိုက်ပါကြောင်း..။
အနောက်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသမှာ.. ဖြစ်ခဲ့တဲ့.. အရေးအခင်းအားလုံး.. တရားဥပဒေအတိုင်း.. ဖြစ်လာမယ်လို့.. ယူဆမိပါကြောင်း..
ကျမက the voice ကတင်တာတွေ ဖတ်နေတုန်း ဒီဘက်ပြန်လာတော့ တင်ပြီးနေပြီ ။ မြန်လိုက်တာ။
သတိတော့ ထားပါ ကိုအမတ်ရေ။
အစ ဆိုတာကတော့ ဒီလိုပဲပေါ့နော..။
တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ ကုလားဖြစ်ဖြစ် ဗမာဖြစ်ဖြစ် ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ်
ဒါကြီး ကြီးလာရင် အားလုံးကို ကျိန်းသေ ထိခိုက်မှာပါ။
ဘယ်သူရဲ့ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှု့မျိုးကိုမှ မပူးပေါင်းကြပါနဲ့…။
ဘကြီးစိန် စကားအတိုင်း ဘာအကြောင်းနဲ့မှ နောက်ကိုပြန်မလှည့်ဘူး ဆိုတာကို..
ဦးမတ် .. ရဲကားက တာယာ အသစ်ဗျ နော် ..
ဗယာကြော် စီဂျေ အူးမင်းမတ်
ကိုမတ်ရာ အဟီး ကျွန်တော် ကတော့ သူများဆိုဒ်တွေက ပုံတွေ နဲ့ အခုလေးတင် တင်လိုက်မိတယ်ဗျာ.. ။ ဆော်ရီးဗျာ..။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ ကွဲမယ်တော့ထင်တာပါပဲဗျာ။။။။ နောက်မှတွေ့မယ်။
မူစလင်တွေ ဘာသာရေးစိတ်ဓါတ် အရမ်းပြင်းထန်တာ
သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ ဒီကိတ်စကနေပြီး အာရုံတစ်ဘက်လှည့်လို့ရတဲ့
အာရုံပြောင်း ဆိုက်ကိုနိုင်ငံရေး တစ်ကွက်လောက် ထပ်သုံးမယ်လို့
လက်သွက်သော အမတ်မင်း … ဟီ ဟီ ဟိ …
CJ ပီသတာ ချီးကျူးပါသဗျာ
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သတင်း ကို
သတင်းကို အမြန်ဆုံးတင်ပေးတဲ့အတွက်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအမတ်မင်း….
မီးမွှေးသလားသေချာမသိပေမယ့် ဒီမီးကို မသတ်တာတော့ သေချာတယ်။ ခုပဲ သွားကြည့်ပြီးပြန်လာတာ။ လူ ၅ /၆ ယောက်လောက် က တောင်ဂုတ်မှာ အသတ်ခံရတဲ့ ပုံတွေကိုင်ထားတယ်။ ဗလီဖက်မှာ ကပ်ပြီးရပ်နေကြတယ်။ ဘေးကနေ ရပ်နေပေးတဲ့ ကုလားလူမျိုးတွေရှိတယ်။ အသက် ၅၀ လောက် လူကြီးတစ်ယောက်က ဘ.ယ်မှာလဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးတယ် ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးတယ်ဆိုတာ ဆိုပြီးအော် နေတယ်။ သတင်းထောက်တွေတော့ တော်တော်များတယ်။ လမ်းပြ မော်တော်ပီကယ်တွေရှိတယ်။ ကျောက်တံတားရဲစခန်းက ရဲတွေ သွားတာမတွေ့ဘူး။
ဆရာက ဆရာမို.လို. ဆရာကို ဘာမှမပြောလိုတော့ပါဘူးဆရာ… ဆရာရိုက်ချက် တယ်လန်းသကိုးဆရာရဲ.
အခု ၄း၁၀ ခန့် နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့တာကတော့ ..
အသတ်ခံရတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဘာကြောင့်ကိုင်ဆောင်ပြီး ..
မီဒီယာတွေက အစဆွဲထုတ်တယ် ဆိုတဲ့
စကားတခွန်းကိုလည်း နားထောင်နေတဲ့ဒီယာသမားတွေကဒေါသထွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်…
အခုလက်ရှိလည်း ကိုယ့်အုပ်စုအလိုက် စုဝေးနေကြသလို အဆင့်မသင့်ရင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့
အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ရတော့မယ် …. ။
ထိရောက်တဲ့ အမြန်မချနိုင်လျှင် … အခြေနေတွေ ပိုဆိုးကုန်တော့မှာပဲ ………. ။
အဲဒီပို့စ်ထဲပဲ.. တယောက်က.. အယ်လ်ကိုင်ဒါမဟုတ်ပဲ.. မွတ်စလင်ကလေးငယ်တွေကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်ဆုံးမသင်ကြားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့..ကော်မန့် ပြန်ရေးခဲ့တယ်..
အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်အပြီး ပို့စ်မှာပြောဆို မန့်ကြတဲ့ပုံတွေ အရရော..
တကယ်လို့သာ ဆက်စပ်နေခဲ့မယ်လို့များ ထင်သာလာခဲ့ရင်တော့..
သဂျီးဆီက စည်းမျဉ်းအသစ်တွေ မြင်ရဦးမဲ့ပုံပဲ ရယ်..
ဟုတ်တယ် သဂျီးရေ… ကျနော်လည်း မှတ်မှတ်ရရပဲ
အဲ့ပို့စ်မှာ အရမ်းဆဲနေတာ မြင်တာနဲ့ အမြင်မတော်လို့
ဆားပုလင်းဦးခိုင်ရေ… အိုင်ပီတော့… တဖြည်းဖြည်း
အဖြေပေါ်ဖို့ ဘီအီးတစ်ပက်လောက် သွားကစ်လိုက်ဦးမယ်.. ဟီးး..
အူးဗိုက်ရေ… လိုက်ဦးမလား.. နင့်ကို ၂ ပက်တိုက်မယ်လေ…
ကျနော့်ဘဝ သမိုင်းမှာ အရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်ဖြစ်အောင် ပြောခံရတဲ့ ပို့ စ်ဖြစ်လို့ 
သူ့ အကြောင်းအတော်သိချင်တယ်ဗျာ။အဲ့တုန်းက အကောင့်(၂)ခုက အဓိကပါ။
adular /Tun Tunနဲ့ Thu Thu ပါဘဲ။Thu Thu ကကွန်မန့် ပေးသူပါဘဲ။
တောင်ကုတ်ကိစ္စမှာ သေဆုံးသွားသူတွေဟာ ဒီလ(၂၅)ရက်နေ့ ကတင်တဲ့ပို့ စ်နဲ့ 
တော့ မပတ်သက်ပါဘူး။အဲ့ဒီပို့ စ်တင်သူကို သူကြီး ပြောပြသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလ (၂၅)ရက်နေ့ တင်တဲ့ပို့ စ်က ဂျမာအသ်အဖွဲ့ သားများမှာ ကိုယ်ပိုင်ကားများဖြင့်
လာရောက်၍ အေးဆေးစွာ ပြန်သွားကြခဲ့ပြီးပါပြီ။
အခုကြားရတာက သံတွဲကားမှာ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေက အဲဒီဆူးလေနားက ဗလီကတာဝန်ခံပြီး
စေလွှတ်ခေါ်တာမို့ အခုလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ ဆူးလေနားကဗလီကတာဝန်ခံမှု့အားနည်းလို့ ဗလီကိုဆန္ဒပြတာလို့ ပြောနေကြတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် သိတဲ့သူများအတည်ပြုပေးပါ။
Oo မတ်က ..
CJ ပီသပါ့ ..
ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ သတင်းအတွက် ကျေးကျေးပါနော့ …
ရွာထဲက အမတ်မင်းကတော့ သတင်းတွေကို ရွာထဲမှာ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တင်ပေးပြီး အမတ်အလုပ် (စီဂျေတွေ နားထား) ကို တာဝန်ကျေပါပေတယ်။
ဘာယာကြော်ပါ အမတ်မင်းရေ .. အသိတစ်ယောက်က မြို့ထဲ မသွားဖို့ လှမ်းသတိပေးတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာ။ ကောလဟာလ လို့ထင်ခဲ့တာ။ အခုမှ သတင်းစုံသိရတော့တယ်ဗျို့ ။
ဒီနေ့ သံတွဲ ကို တောင်ကုတ်က လူတွေ ဆင်းလာတယ် ဆိုပြီး နေ့လည် ၃း၃၀ လောက်မှာ သံတွဲ အ၀င်လမ်းတွေ အားလုံးပိတ်ခဲ့တယ် ။ ဈေးကိုလည်းပိတ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ကြဘဲ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာတော့ ပြန်လည် သွားလာခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါသည်။
ဒီကိစ္စတွေ နောက်ကွယ်ကကြိုတင် ဖန်တီးချက် ပါမပါစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်။
၈၈ ကိုမြအေးကလည်း ထောင်ချောက်ထဲမ၀င်ဖို့ပြောသွားပါတယ်။
ရွာသူရွာသားတွေလည်း လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အစွဲတွေ ထည့်ပြီး မဝေဖန်ကြဖို့လိုပါတယ်
မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို သတ်မိကြတဲ့အတွက်
ကျူးလွန်တဲ့ ၂ဖက်စလုံး သူတို့တရားသူတို့စီရင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်က ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ(ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ) လူမသတ်ရတဲ့အပြင်.. သတ်သူ/သတ်ရန်ကြံစည်နေသူတွေကိုလည်း ဖြောင်းဖျတားမြစ်ရပါမယ်..။
” မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို သတ်မိကြတဲ့အတွက်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် ”
အဘ လည်း ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ် ။
ဟိုဖက် Post တစ်ခု မှာလည်း ကိုအောင်ပု တောင်းပန်ထားတာတွေ့တယ် ။
ဒေါက်တာရေ. ကျနော်တို့ သံတွဲမှာ ဘာသာပေါင်းစုံအေးဆေးစွာနေထိုင်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။
ကျနော့်အသက်ထိအရွယ် (၃၀)နားထိမှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘာအဓိကရုဏ်းတစ်ခုမှမဖြစ်ဖူးပါဘူး။
သံတွဲမှာ ကဈေးကြီးမီးလောင်လို့ နစ်နာဆုံးရှုံးသူတွေ နေရာတကျမလုပ်ကိုင်နိုင်သေးတာ၊မိုးရာသီဖြစ်လို့ ချောင်း
ရေကြီးမှာရယ်၊အရောင်းအဝယ်မကောင်းကြတာရယ်၊ခုလို သတ်ကြ၊ဖြတ်ကြနဲ့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲမို့ အားလုံး လုပ်ကိုင်
သံတွဲမြို့ လူဦးရေမှာ ၅၀%က ဗုဒ္ဓဘာသာ၊၃၀%က အစ္စလာမ်၊၁၅%က ခရစ်ယန်၊၅% ကဟိန္ဒူတွေပါ။အားလုံး
ညီရင်းအကိုတွေလို အတူတူနေလာကြတာ နှစ်ပရိစ္စတ မနည်းတော့ပါ။
ဒီမိုကရေစီမှာ အများစုဆန္ဒကို လိုက်နာရပီး အနည်းစုအမြင်ကို လေးစားဂျရဒယ်။ အဂုလည်း မွတ်စလင်များရဲ့ အမြင်သဘောထား ထုတ်ဖော်ပြမှုကို နားလည်လက်ခံပေးရဗာမယ်။ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် အားနည်းသူကို အားကြီးသူဂ ဖိနှိပ်ကြေးဆိုရင် ကိုယ့်အလှည့်လည်း ပိုအားကြီးသူရဲ့ ဖိနှိပ်မှုခံရပါလိမ့်မယ်။ အခြားနေရာတွေမှာ အနည်းစုဖြစ်နေတဲ့ မွတ်စလင်မဟုတ်သူများအတွက်လည်း အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ စဉ်းစားပေးဂျပါ၊ မွတ်စလင်များကလည်း တဖက်အမှားတခုထဲ ကြည့်တာထက် ကိုယ့်ချို့ယွင်းချက်များကို အခွင့်သင့်တုံး ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြဗာလို့…။
ကျွန်တော်ကတော့ ချမ်းချမ်း ရဲ့ သီချင်းလိုပဲ တကယ်ဆိုရင်အချစ်ပဲလိုတယ်လို့ပဲ ပြောချင်မိတယ်ဗျာ
1942 နှစ်လို စစ်တွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ ကုလား ဗမာအဓိကရုဏ်မျိုးထပ်မဖြစ်စေချင်တော့ပါဘူးဗျာ
အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ ။